Ngathi | Zhejiang Jinhuan Chain Ulwenziwo lokuthile Co., Ltd.
I-Zhejiang Jinhuan Chain Manufacturing Co., Ltd. yasekwa ngo-Okthobha u-1993, li-R & D yobuchwephesha kunye neshishini lokuvelisa. Umzi-mveliso ugubungela ummandla opheleleyo weemitha zesikwere ezingama-20000, kunye nee-asethi ezizinzileyo ezingaphezu kwezigidi ezingama-30 ze-yuan, iiseti zezixhobo ezingaphezu kwama-200, abasebenzi abangaphezulu kwe-100 kunye namandla emveliso angaphezulu kweemitha ezili-10 ngonyaka. Uphawu "Jinhuan" kunye "Jinhong" brand amatyathanga eziveliswa mveliso amkele imigangatho yesizwe (GB) kunye nemigangatho yamazwe ngamazwe (ISO). Iimveliso zithengisa kakuhle kwilizwe liphela kwaye zithunyelwa kuMzantsi-mpuma Asia, eMzantsi Melika, e-Afrika nakweminye imimandla.
Ezona mveliso ziphambili zomzi mveliso ziluthotho a kunye no-B amatsheyini e-roller, imixokelelwane yesithuthuthu, imixokelelwane yokuhambisa esemgangathweni kunye engaqhelekanga, imixokelelwane yeepleyiti, imixokelelwane yoomatshini bezolimo kunye neetyathanga ezahlukeneyo ezizodwa. Kwiminyaka yakutshanje, ishishini belisoloko lityala imali, lixhomekeke kwinkqubela phambili yesayensi kunye netekhnoloji, ukukhawulezisa uphuhliso lokuchaneka okuphezulu kunye namandla aphezulu, kwaye lihlangabezana rhoqo neemfuno zeemarike zasekhaya nakwamanye amazwe.
Ulawulo lweNzululwazi ukuqhubela phambili imveliso
Kwinkqubo yokuphumeza inkqubo esemgangathweni ye-ISO9000, amashishini athe ngokuthe ngcembe aseka amaxwebhu enkqubo yolawulo lomgangatho kunye nesayensi, amisela inkqubo yolawulo lomgangatho egxile kuthintelo, enza indlela yokuphucuka okuqhubekayo kunye nomjikelo olungileyo, kunye nokuphucuka komgangatho wemveliso. Umzi-mveliso unezixhobo ezipheleleyo, ubuchwephesha obuphezulu, inkqubo yolawulo lomgangatho ogqibeleleyo kunye neendlela zokuvavanya ngokupheleleyo. Imigca yemveliso, iinkqubo ezintsha kunye neetekhnoloji ezintsha ezinenqanaba eliphambili ekhaya nakwamanye amazwe ziye zaziswa okanye zakhiwa ngokulandelelana, kubandakanya ibhanti enemingxunya eqhubekayo yokuvelisa ubushushu, ukuguqula irhasi yokugungxula, umgca wemveliso yecarbonitriding, umgca wemveliso yephosphating, ukuthambisa ioyile umgca, ipleyiti chain wadubula peening kunye chain pre umzobo.
ABANYE BABathengi BAKHO
OKO KUTHETHWA NGABathengi
Sonwabile kakhulu ukukhula kunye nawe kwintsebenziswano yexesha elide ukusuka ekuqhelekeni ukuya ekuqhelaneni, ukusuka ekuqhelaneni ukuya kuthembekile .———— UWilliam
Ityhuna eliqhutywa zizithuthuthu, Precision mqengqeleki chain, Isithuthuthu seDrive Chain, Icala lasekunene leCandelo leSithuthuthu, Eyona ndlela ihamba kakuhle ngesithuthuthu, Amanqwanqwa e-roller ojikelezayo ngokufutshane,